Baaq Dallada SSE oo soo dhawynaysaa aragtiida Wasaarada Arrimaha Dibadda ee Shiirka Bruxelles (TUESDAY - 17/September/2013)
Dallada SSE oo ay ku bahoobeen jaalliyadaha ama ururada Somaliland ee Yurub, waxay baaqan ku hambalyaynaysaa kuna taageeraysaa qaraarka ay xukuumadda Somaliland ka qaadatay kulanka xukuumadda Ingiriisku ku qabanyso magaalada Bruxelles, taariikhdu markay tahay 16 september 2013. Waa kulan loo qabanayo dalka Soomaaliya isla markaana guddoomintiisa ay daadihinayaan madaxweynaha Soomaaliya iyo Wasiirada Arrimaha Dibadda ee midowga Europe. Hambalyadani waa mid si gaara ugu wajahan Wasiirka wasaarada arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland (Mudane Mohamed Bihi Yoniis). Si guudna u hambalyaynaysa Golayaasha Qaranka, Axsaabta Siyaasayada iyo dhammaan dhinacyada si toosa iyo si dadbanba uga qayb qaatay taageerada go’aankan geesinimada leh.
Sida aad la socotaan Dallada SSE, waxay hore uga soo saartay talooyin ay la wadaagtay xukuumadda Soomaliland, kuwaasoo ujjeeddooyinkoodu ahaa in aan sinaba looga qayb qaadan kulankaa maadaama aanu sinaba u khuseyn danta dalka iyo dadke reer Somaliland isla markaana taxanaha ajandaha kulanku uu yahay mid gebi ahaanba ku jaan go’an arrimaha waddanka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya.
Aragtida Dallada SSE waxay ku salaysneyd in kulanku uu yahay mid 100% lagu xaalaynayo arrimaha maanta ka jira dalka Soomaaliya isla markaana ka qayb galkiisu ay kaaraamo iyo sumcad daro ku aheyd Somaliland.
Go’aankan ka soo baxay ee Xukumadaa Somaliland uu ka qaatay kulankaa ka qayb galkiisa Dallada SSE waxay u aragtaa: